HomeỤWAAsia994 AzerbaijanMap nke Baku Metro
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 994 Azerbaijan, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Metro 0
maapu nke uzo ugbo ala
Ọ bụ usoro metro dị na Baku, isi obodo Azerbaijan. 6 mepere na November 1967. Ogologo ya bụ 36,7 km ma mejupụtara ahịrị nke 3 ma gụnye nkwụsị 25. Ọ bụ obodo mbu n'ime obodo ndị Alakụba.
Na ngwụsị nke narị afọ nke iri abụọ, Baku ghọrọ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmepeanya na sayensị nke Caucasus, kamakwa nke Alaeze Ukwu Russia na Soviet Union mbụ. Dabere na nke a, mgbe atụmatụ ụzọ ụgbọ oloko nke obodo Moscow na Leningrad, e kpebiri iwu ụzọ ụgbọ oloko na mpempe akwụkwọ mbụ nke atụmatụ mmepe nke Baku bụ obodo nke atọ na 1932.
Mana n'etiti afọ 1941-1945, nke malitere mgbe obere oge gasịrị, Agha Secondwa nke Abụọ gbochiri mmezu a. Naanị mgbe afọ 1947 gachara agha ahụ na 2, gọọmentị Soviet kpebiri ịmalite ọrụ nyocha ọrụ. Na 1949, owuwu nke uzo ugbo ala bidoro. Na 1954, a kwadoro ọrụ ọrụ aka nke akara mbụ wee wuo usoro 12,1 km nke metro ahụ. E wuru okporo ụzọ ahịrị n ’akụkụ ọdọ mmiri 500 - 700 m site na Oke Osimiri Caspian.
Na 1953, amachibidoro ọrụ ụlọ iwu ruo nwa oge ma rụchaa ya na 1960. Nke a egbula oge inyefe ụzọ ụgbọ oloko Baku.
N'afọ 1966, e guzobere Baku Metro Authority site na ọrụ 6 dịka mmegharị, ụgbọ oloko na-agagharị, ngwaọrụ na ọwara, teknụzụ ahụike na nke electromechanical, akara ngosi na nkwukọrịta, ọrụ ntinye aka teknụzụ.
6 November Ogige 1967 nke ụgbọ oloko dị na Baku na 5 - Baku Soveti (taa İçarişəhər), 26 Bakı Commissary (taa Coast), 28 Aprel (taa 28 May), Gənclik na Nəriman Nərimanov ọdụ na 9,2 n'okpuru ọdụ ụgbọ mmiri. E tinye ọkwa. N'ime ụlọ ọrụ ndị a, 1 dị omimi. Otu n'ime ha bụ ọdụ Xətai (taa Shah İsmail Xətai) dị na mpaghara a na-akpọ Garaşehir. 4 November Ọrụ ije na-aga n'ihu nke ụzọ ụgbọ oloko na mmegharị nke ụgbọ oloko maka ihe omume a malitere na 25.
Mgbe mpaghara nke mbụ gasịrị, mpaghara nke abụọ nke 2,3 km bidoro ịrụ ọrụ. E tinye mpaghara nke atọ nke 6,4 km n'ọrụ. Nke ahụ bụ nnukwu “8. kilometa nwa nwoke jikoro obodo ahu na mpaghara ulo oru ya na etiti obodo. Agba nke abụọ nke 9,1 km gafere n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Baku platea wee wuchaa ya na 1985 site na iji wuo ọdụ ise. Abụọ nke ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ bụ nnukwu obosara omimi.
Ewuru dị ka ọnụ ụzọ ámá maka ọdụ 28 May, etinyere ọdụ Câfər Cabbarlı na 1993.
European Union ekenyela 2002 nde euro maka imecha ụlọ ọrụ Həzi Aslanov, nke etinyere ọrụ na 4.1.
Kemgbe 2006, usoro nkwụnye ego mkpụrụ ego ochie edochila kaadị RFID ọhụrụ. Na 2007, egosiputara kaadị ndi a n'uzo zuru oke.
Ejiri eriri 9 October Nâsimi rụọ ọrụ na 2008.
30 Disemba Na 2009, a na-etinye ebe a na-atụ anya Azadlıq n'ọrụ.
29 June Na 2011, etinyere ọdụ Dərnəgül.
19 Eprel 2016, Avnovagzal na Memar Əcəmi 2 ọdụ na 3. E tinyela ọrụ n’ọrụ.
Ugbu a, ụzọ ụgbọ oloko Baku nwere ahịrị 36,7 na ogologo n'ogologo 3 km, 25 na-agba ọsọ na ọdụ ụgbọelu anọ na-aga n'ihu. Stationslọ ọrụ ndị a dị na nnukwu ọnụ ụzọ mbata 27. Asaa nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị omimi. Ejiri ụdị ịgbago elu nke 4000 n'ime ụzọ ụgbọ oloko n'ogologo ogologo karịa mita 41. Ogologo ngụkọta nke okporo mmiri ahụ karịrị kilomita 17,1. A na-ahọrọ ụzọ ụgbọ oloko Baku site na ndị ọzọ, jiri eriri ya mee ihe dabere na enyemaka dị n'etiti obodo na mpaghara ugwu, yana mkpọda% 60 na% 40 puku na ọtụtụ ọnụọgụ ndị nwere obere radii.
Map nke ụgbọ ala Gelsenkirchen 27 / 07 / 2012 Gelsenkirchen Subway Map: Oge emelitere: July 2012
Map nke Oberhausen 27 / 07 / 2012 Oberhausen metro map: Na-emelitere ikpeazụ: July 2012
Map nke Saarbruecken Metro 30 / 07 / 2012 Saarbruecken Metro Map: Oge emelitere: July 2012
Map nke Tokyo Metro 09 / 08 / 2012 Obodo Metro Tokyo E meriri emelitere: August 2012
Otogar-Bagcilar-Basaksehir-Olimpiyatkoy Ụzọ ụgbọ ala ụzọ ụgbọ oloko 15 / 06 / 2013 Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Line Map, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa njem usoro emejuputa na European n'akụkụ Otogar-Bağcılar-Başakşehir Line mepere Esenyurt-Kirazli akara ọrụ. Başakşehir Mayor Mevlüt Uysal, kwuru, sị ọtụtụ ndị na ụzọ ụgbọ oloko akara, nke ga-belata European n'akụkụ ga başakşehir-Kirazli akara. European n'akụkụ, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa njem usoro emejuputa Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Line mepere Esenyurt Kirazli akara ọrụ. Uzo nke Mayor nke Başakşehir, Mevlüt Uysal meghere, nwere ebe 9 nọ. E nwere nnukwu elu, igwe eletrik na ihe osise na-acha odo odo na ebe ọ bụla a na-eji ụdị dị iche iche emepụta ebe dị iche iche.
Istanbul Metro Map 2019 28 / 09 / 2013 Akwukwo map nke Istanbul nke 2019: Mayor nke Istanbul Metropolitan Municipality Kadir Topbaş kwuru na Istanbul ga-abu uzo nke uzo kachasi elu n'ime uwa mgbe New York na oghere 2030 kilomita na njedebe nke 776 na ugboala uzo ozo malite n'afọ abia. Kadir Topbaş, ndi oru nta akuko "I ga - abughi nwa akwukwo? Medi azaghị ya. Obodo Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas nwere nzukọ Halic Congress Center maka nzukọ usoro ihe omume, ndị isi obodo na-achị isi, ndị ọrụ na ndị otu nọ na-aga. E gosipụtara ihe ngosi ndị ọhụrụ ahụ site na ndị na-ege ntị na ememe nke malitere site na ngosi ihe ngosi mmanya. "Metro n'ebe nile metro
Map nke Istanbul Metro 04 / 01 / 2014 Istanbul Metro Map: A na-egosipụta nkọwa niile nke Istanbul Metro Map na map ma pịa na map maka mbipụta ka ukwuu nke Istanbul Metro Map. Map ndị ahụ bụ naanị maka ihe ọmụma. İstanbul Metro Map na-agbakwunyere, pịa ebe a iji gbasaa. Na mgbakwunye, nke mbụ Istanbul Rail Systems Map bụ ebe a. I nwekwara ike iji map anyị na-emekọrịta ihe na usoro igodo gị. Istanbul Metro ga-arụ ọrụ ruo 2019 Beylikdüzü TÜYAP - Bahçelievler - Kirazlı Metro Rail System: 2017 Bakırköy - İncirli - Bahçelievler - Kirazlı Metro Rail System: 2017 Halkalı...
Ankara Metro Map na Ankaray Rail System 15 / 07 / 2019 Ankara Metro Okporo ígwè System Map na Ankaray: ọha iga ọrụ Ankara, isi obodo nke Turkey, nke Ankara Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego okporo ígwè iga netwọk. Networkgbọ njem ụgbọ mmiri Ankara dị ugbu a bụ nke nwere usoro ụgbọ okporo ígwè dị mfe, ụzọ ụgbọ oloko, ropeway na nke ime obodo na ụgbọ njem ọha nke EGO na-arụ ọrụ nwere akụkụ anọ: 30 n'okporo ụzọ Dikimevi - AŞTİ n'okpuru aha Ankaray Ağustos Light train system açılan, Ankara Obodo nke nwere Kizilay - Batikent way 1996 Disemba 28'de sistemu siri ike na-arụ ọrụ. 1997 February 12 na Batıkent - OSB-Törekent line…
Stationsgbọ mmiri Baku
Ụzọ ụgbọ ala Baku
Ogologo nke ụzọ ụgbọ ala Baku
Ationgbọ njem gaa na Mi too Bay Beach Beach
Map nke ụgbọ ala Gelsenkirchen
Map nke Oberhausen
Map nke Saarbruecken Metro
Map nke Tokyo Metro